Apple mividy ny orinasa Faceshift | Avy amin'ny mac aho
Apple mividy orinasa Faceshift
Hanomboka ny tsena virtoaly virtoaly. Amin'ny fiandohan'ny taona manaraka, fitaovana marobe no hanomboka hanatratra ny tsena ahafahantsika mankafy lalao, sarimihetsika ary hafa amin'ny tranontsika. Apple dia tsy mbola naneho hevitra momba an'io, fa ny hetsika farany, ny fividianana Faceshift dia toa manaitra ny fahalianan'ny orinasa amin'ity sehatra vaovao ity.
Ny famoahana TechCrunch dia nanamafy ny fividianana ny orinasa Faceshiftmiorina ao amin'ny Zurich, izay namolavola teknolojia ahafahana mamorona avatar sarimihetsika na tarehimarika hafa mifototra amin'ny endrika tarehin'ireo tarehin-tsoratra amin'ny fotoana tena izy. Ity teknolojia ity dia nampiasaina tamin'ny sary mihetsika farany Star Wars The Force Awakens.
Rehefa nifandray tamin'i Apple ny famoahana dia namaly tamin'ny tadiny mitovy amin'izany ihany ny mpitondra tenin'ny orinasa: Apple dia efa nividy orinasa teknolojia kely hatry ny ela ary tsy mitatitra momba ny drafitra ho avy mifandraika amin'izy ireo. Amin'izao fotoana izao tsy fantatray hoe oviana no nitranga ilay fividianana, satria nanomboka nipoitra ny fiandohan'ny taona ny tsaho momba ny tombotsoan'ny orinasa Cupertino, saingy nanjavona.
Ny teknolojia Faceshift dia nampiasaina tamin'ny lalao maro mba hanomezana fomba fijery tena misy ny fihetsiky ny olona. Ary koa Nampiasaina tamin'ny sarimihetsika marobe hanatsarana sy hanamorana ny fizotran'ny sary mihetsika Amin'ireo mpilalao. Ny fampiasana iray hafa azo atao an'ity teknolojia ity dia azo ampiharina mba hiarovana ny fidirana izay fanekena ny tarehy no hany fomba hidirana.
Tsy toy ny teknolojia hafa, Ny Faceshift dia miankina amin'ny fampiasana fakantsary an'ny Intel RealSense, toy ireo izay mampifangaro ny Surface Pro 4 farany sy ny Lumia 950 ary ny 950 XL vaovao, izay manamora kokoa ny fampiasana azy noho ny haitao nampiasaina hatrizay ary mitaky ny famenoana ny tarehy sy ny hoditra misy sensor mba hahafahana mitondra ny hetsika rehetra amin'ny efijery.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple mividy orinasa Faceshift
Ahoana ny fanatsarana ny fampisehoana menio amin'ny Apple TV
12 "MacBook nihena talohan'ny zoma mainty